Freedom Uprising: ၀ိရောဓိများနှင့် စကားစမြည် (၁)
" သား … မင်း နိုင်ငံရေးတွေလုပ်နေတယ်ဆို ……. "
" ဟုတ်ပါတယ် အဖေ "
" ထောင်ထဲမှာ အချိန်ကုန်ချင်လို့လား။ ကိုယ့်ဘာသာ အေးအေးနေပါ သားရယ် "
" ဒါကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အရေးမှာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ အဖေရဲ့ ……… နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ နိုင်ငံ့အရေးမှာ တာဝန်ရှိတယ်လေ။"
" တော်ပါကွာ ။ စကားလုံးကြီးကြီးတွေ ငါ့ကို လာရွတ်ပြမနေနဲ့။ မင်းလုပ်လို့လည်း ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
အေး မင်းဘာသာ မင်းယုံကြည်ရာ မင်းလုပ်ပြီး ထောင်ထဲသွားနေလည်း အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ရဲ့ စီးပွားရေးပါ ထိခိုက်လာလိမ့်မယ်နော် "
" နေပါအုံး အဖေ …… အဖေက သူတို့နဲ့ ပေါင်းပြီး စီးပွားရေးလုပ်စားနေတာလည်းမဟုတ်။ ကိုယ့်ဘာသာ သမ္မာအာဇီဝ အလုပ်လုပ်နေတာ ဘယ်သူက ဘလိုင်းကြီး လာနှောင့်ယှက်လို့ရမှာလဲဗျ။ "
" တကယ်လို့ နှောင့်ယှက်လာရင်ရောကွာ။ မင်းလည်း သူတို့အကြောင်းသိနေတာပဲ။ မင်း နောက်ထပ်မှတ်ထားဖို့က မင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် မငဲ့ရင်နေ။ မင်းမိသားစုကို မင်းပြန်ကြည့်အုံး။ "
" ………………………………….. "
" ဟေ့ကောင် မင်း နိုင်ငံရေးတွေ လုပ်နေတယ်ဆို ……… "
" ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ ဒါတွေလုပ်လို့ မင်း .. အဖမ်းခံရတာကလွဲလို့ ဘာတွေဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲ "
" အေးအေးဆေးဆေးနေပါကွာ ……….. "
" ဒီလို အရည်မရ အဖတ်မရအလုပ်တွေလုပ်လို့ မင်းအတွက် ဘာအကျိုးရှိမှာလို့လဲ "
" ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အေးအေးနေစမ်းပါကွာ "
" အိုကေ မင်းတို့ကို ငါ တစ်ခုပဲမေးမယ်။ မင်းတို့ လက်ရှိအုပ်စိုးနေတဲ့သူတွေရဲ့ လက်အောက်မှာ နေရတာ နေပျော်လား။ သူတို့ရဲ့ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးကို မင်း လက်ခံလား။ "
" ဒီမိုကရေစီမလိုချင်ဘူးလား။ "
" နေပျော်တယ်၊ လက်ခံတယ်၊ မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် မင်းတို့ခံယူချက်နဲ့မင်းတို့ပဲ။ ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။ ဘာမှလည်း ဆက်ပြောစရာမလိုတော့ဘူး။ "
" အဲ .. ဒါပေမယ့် မင်းတို့ကိုယ်တိုင် မကြိုက်တဲ့ ဒီအာဏာရှင်စံနစ်ကို ကိုယ်တိုင် မဆန့်ကျင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်၊ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ဒီလိုတော့ မပြောပါနဲ့။ မင်းတို့က အဖေ၊ အမေကျွေးထားတဲ့ထမင်းကို အေးအေးဆေးဆေး စားနေရတာနဲ့ …… ကွာ။"
" မင်းတို့ နားလည်မလားတော့မသိဘူး။ ငါကလည်း လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် အေးအေးဆေးဆေး စားနိုင်တဲ့ဘ၀မျိုး လိုချင်လို့ လုပ်နေတာ၊ နိုင်သလောက် ၀င်လှုပ်ရှားနေတာကွ။ "
" မင်းမလုပ်လည်း သူများတွေလုပ်နေမှာပဲကွာ။ ပြီးတော့ ဒေါသတော့မထွက်နဲ့ကွာ။
မင်းလုပ်လို့ ဘာဖြစ်လာမှာလဲ။ "
" မင်းတို့လို ငါလုပ်လို့ဘာဖြစ်လာမှာမို့လဲ ဆိုတဲ့သူတွေများနေလို့ ဒီကောင်တွေ သက်ဆိုးရှည်နေတာပဲ။ ငါလုပ်လို့ ဘာဖြစ်လာမှာလဲ ဟုတ်လား။ ဘာဖြစ်လာမယ် မဖြစ်လာဘူးဆိုတာ အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းတို့ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ နေပြီး ဒီနိုင်ငံမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပဲ။ မင်းတို့ကို ဘာကဘာ ဘယ်ဟာက ဘယ်ဟာ ငါ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူး။ "
" ငါတို့ကတော့ ထောင်ကျမခံနိုင်ဘူး။ "
" ဟား ဟား .. မင်းတို့က ငါထောင်ကျခံနိုင်လို့၊ ထောင်ထဲမှာ ပျော်ပျော်ကြီးနေနိုင်လို့ လုပ်နေတယ်ထင်လို့လား။ မင်းတို့ ထောင်ကျဖူးတဲ့သူတွေကို တွေ့ရင်မေးကြည့်စမ်းပါ။ ထောင်ထဲမှာ နေရတာ ပျော်လားလို့။ "
" ခံယူချက်တို့၊ ယုံကြည်ချက်တို့ဆိုတာ သူများပြောလို့၊ သူများစည်းရုံးလို့၊ သူများခိုင်းလို့ လုပ်လို့ရတမ်းလားကွာ။ လူတိုင်း ရင်ထဲမှာ အမှန်တရားဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ။ ဒါကို မြင်အောင်ကြည့်ရင် မင်းတို့ငါ့ကို ဒီလိုစကားတွေ ပြောစရာကိုမရှိဘူး။"
" မ .. မောင် နိုင်ငံ့အရေးလုပ်တဲ့အပေါ်မှာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။ "
" မကတော့ ဘာမှနားမလည်ပါဘူး။ မောင် အဖမ်းအဆီးခံရမှာကို စိုးရိမ်တယ်။
မောင် ယုံကြည်လို့ မောင်လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ တားလည်း မတားရက်ပါဘူး။
မောင်တခုခုဖြစ်လို့ မ .. တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ အခုက သားအတွက်ပါ ပူရတော့မယ်။ "
" ဒီသားအတွက်ကြောင့်ပဲ မောင် နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပိုပြီး ခိုင်မာလာတာပါ မ .. ရယ်။
အခုချိန်မှ ဒီမိသားစုအတွက် နောက်ပြန်လှည့်ရင် တချိန်မှာ သားက ဒီအကြောင်းတွေ မေးလာခဲ့ရင် မောင် .. ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ ပြောပြရမှာလဲ။ "
" နိုင်ငံရေးဆိုတာ မတို့ ထင်သလို လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ်တိုင် ပါဝင်လှုပ်ရှားရမယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပါဝင်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်နိုင်တဲ့ဝန်၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍရှိပြီးသားပါ။ အရေးအကြီးဆုံးက အဲဒါကို မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် မလုပ်ကြဖို့ပါ။ အခုပဲ မ .. မောင့်ကို နားလည်မှုပေးလိုက်တာဟာ မ .. နိုင်တဲ့ဝန်ကို မ .. ထမ်းလိုက်တာပါပဲ။ "
" မတို့သားအမိအတွက် မောင် .. က မျက်နှာလွှဲခဲပစ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်တော့မှလည်း မလုပ်ပါဘူး။ မောင် အကုန်လုံးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။ "
" အင်းလေ …… မောင်က မောင့်ယုံကြည်ချက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ မ .. ပါရမီဖြည့်ရုံကလွဲလို့ ………. "
" တော်ပြီ … တော်ပြီ … မ .. ခံစားချက်ကို နားလည်တယ်။ ဆက်ပြီး မပြောနဲ့တော့။ မောင် .. မ .. ကို အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
Posted by freeburma at 11:04 AM
Labels: Talking With ............
လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ တည်ရှိနေတဲ့ စိတ်ဓါတ် အခြေအနေတွေကို စကားပြောဟန် အရေး အသားနဲ့ ရေးထားတာ ထိမိတယ် ဗျာ။ ဆက်ရေးပါဦး ... အားပေးနေပါတယ်။
အိမ်မှာလဲ အတူတူပါပဲရှင် :(